घरको अत्याचार सहन नसकेर गायिका टिका सानुले के गरिन यस्तो ? दर्शकका आँसु रोकिएनन् - Nepal Insider
Home/भिडियो/घरको अत्याचार सहन नसकेर गायिका टिका सानुले के गरिन यस्तो ? दर्शकका आँसु रोकिएनन्
घरको अत्याचार सहन नसकेर गायिका टिका सानुले के गरिन यस्तो ? दर्शकका आँसु रोकिएनन् लाईभ दोहोरी बाट सबैको मन जित्न सफल लोकप्रिय गायिका टिका सानुको उत्कृष्ठ शब्द सिर्जना रहेको तीज गीत बुहारी -२ भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको छ । गीतमा खोट लगाउने कुनै पनि ठाउँ छैन । निकै उत्कृष्ठ सो गीतमा एउटी बुहारीले भोग्नु परेको पीडालाई कलात्मक रुपमा गीतमा उठाइएको छ । वास्तविक तीजको भाबना बोकेको सो गीतमा टिका सानु,मानिस खड्का, करिश्मा घर्ती र धन माया नेपालीको आवाज रहेको छ । गीतको म्युजिक भिडियो समेत निकै दमदार रहेको छ ।
भिडियो मा टिका सानु,मानिस खड्का,रमा थपलिया र लक्ष्मी गिरीको अभिनय रहेको छ । गीतको निर्देशन मानिस खड्का ले गरेका छन् । गीतलाई पूर्ण सफलताको कामना सहित सो गीतको पुरै भिडियो यहाँहरुको लागि मन परे शेयर गर्नुहोला । घरको अत्याचार सहन नसकेर गायिका टिका सानुले के गरिन यस्तो ? दर्शकका आँसु रोकिएनन् लाईभ दोहोरी बाट सबैको मन जित्न सफल लोकप्रिय गायिका टिका सानुको उत्कृष्ठ शब्द सिर्जना रहेको तीज गीत बुहारी -२ भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको छ । गीतमा खोट लगाउने कुनै पनि ठाउँ छैन ।
निकै उत्कृष्ठ सो गीतमा एउटी बुहारीले भोग्नु परेको पीडालाई कलात्मक रुपमा गीतमा उठाइएको छ । वास्तविक तीजको भाबना बोकेको सो गीतमा टिका सानु,मानिस खड्का, करिश्मा घर्ती र धन माया नेपालीको आवाज रहेको छ । गीतको म्युजिक भिडियो समेत निकै दमदार रहेको छ । भिडियो मा टिका सानु,मानिस खड्का,रमा थपलिया र लक्ष्मी गिरीको अभिनय रहेको छ । गीतको निर्देशन मानिस खड्का ले गरेका छन् । गीतलाई पूर्ण सफलताको कामना सहित सो गीतको पुरै भिडियो यहाँहरुको लागि मन परे शेयर गर्नुहोला ।
बिरामी भए भन्दै छवि ओझा हस्पिटल भर्ना : शिल्पा बेखबर….भिडियो सहित
दुई श्रीमती सहित पहिलोपटक मिडियामा शिवहरी,अर्को पनि बिहे गर्ने तयारीमा !
नेपालको पैसाले निकै धनि बनेको भारतलाई लाग्यो दाँतमा ढुङ्गा, नेपाललाई भने अहिलेसम्मकै ठुलो फाइदै फाइदा (भिडियो सहित हेरी सक्दो शेयर गर्नुहोस्)
गलबन्दी पछि शान्तिश्री परियारको सबैलाई रुवाउने गीत ( भिडियो)